Kedu mgbe njem njem Express Express ga-amalite? | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraKedu mgbe njem njem Express Express ga-amalite?
21 / 05 / 2020 06 Ankara, 36 Kars, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, Eastern Anatolia Region, General, Isi akụkọ, Turkey
Kedu mgbe awara awara ebido?
TCDD Tasimacilik bụ ihe na-achọ ịmata ihe mgbe ọrụ ụgbọ oloko nke Eastern Express, Touristic Eastern Express na Van Lake Express, bụ ndị a kwụsịrị n'ihi ọrịa coronavirus, ga-amalite. Njem ụgbọ oloko nke ndị njem, ndị na-ese foto na ndị na-anụ ọkụ n'obi nwere obi ụtọ ga-amalite na June ma ọ bụrụ na enweghị mgbanwe.
Dịka otu, ndị njem, ndị na-ese foto na ndị nwere mmasị ga-eso na Eastern Express, ndị ọrụ ụgbọ oloko Touristic Eastern Express na Van Lake Express ga-akpachara anya karịa njem ahụ n'ihi ntiwapụ Covid-19.
N'ihi ntiwapụ nke Covid-19, a gbasoro ụfọdụ iwu nke a ga-agbaso na ụgbọ oloko. N'ihi ya, ụgbọ oloko ga-ebu ndị njem ikike ruru pasent 50. Agaghị ebugharị ndị njem ụgbọ oloko na ụgbọ oloko. Ndị njem ga-enweta tiketi tupu ha eruo. Ọ ga-anọdụ naanị n’oche ha zụtara. Ọ gaghị enwe ike ịga oche ọzọ. Enweghị mgbanwe na ọnụ ahịa tiketi. A ga-ehichapụ ụgbọ oloko. Etu ị ga-esi banye na ebe ndị na-ehi ụra na ndị otu nọ na Eastern Express, Travelistic Eastern Express na ụgbọ oloko Van Lake Express ga-apụta ìhè mgbe mkpebi ịmalite. Amabeghị etu ọrụ ahụ ga-esi banye n'ụgbọ ọgbụgba na Eastern Express.
Eastern Express na-agba ụbọchị kwa ụbọchị n'etiti Ankara-Kars-Ankara ma mejupụtara pulman, akwa kpuchie na ụgbọ mmiri iri nri. Enwere ngalaba 10 na ụgbọ alachechette na mmadụ 4 nwere ike ịga njem na ngalaba nke ọ bụla. Akwukwo, pique na ohiri isi bu nke TCDD Tasimacilik AS nyere, enwere ike iji oche dị na palọ dị ka àkwà mgbe achọrọ ya. Dininggbọ erimeri nwere oche dị n’agbata oche 14-47. Dogu Express mezuru njem ya na Ankara na Kars n'ihe dị ka awa 52.
Okirikiri njem ụzọ mpaghara ọwụwa anyanwụ
Ndị a bụ iwu ọhụrụ aga-etinye na ụgbọ oloko
Insgbọ oloko ga-eburu ndị njem ikike ruru pasent 50.
Insgbọ oloko ga-enwe oche dị ọcha maka ahụ ike n'azụ ụgbọ mmiri ”
“Insgbọ oloko ga-arụkwa ọrụ n'ike pasent 50. A ga-enwe oche na-enweghị isi maka ahụike na azụ. Nkwado akụ na ụba na akọnuche dị mkpa maka nwa amaala iji mụọ oge ọhụrụ. Ọ dị mkpa ịchụ ihe ụfọdụ n’uche iji nwetaghachi ha. Dabere na nyocha, ndị na-anya ụgbọ elu enweghị ike ijide ọnụọgụ Jenụwarị ọbụna n'oge a n'afọ na-esote. Enwere ihe oyiyi yiri ya na ụgbọ oloko ahụ. Ndụ mba ga-agbanwe ugbu a.
O kwuru na a haziri oche ndị dị n'akụkụ ụzọ ụgbọ oloko ahụ iji hazie ịdị anya dị n'agbata oche ndị ahụ dabere na iwu na-agbanwe agbanwe na-elekọta mmadụ na-agbanwe mgbe YHT Coranavirus nke TCDD Taşımacık AŞ na-arụ. Ahịa tiketi maka ụgbọ elu YHT, nke ga-amalite n'etiti etiti June, ga-anọ na ịntanetị ọzọ.
Ndị njem nlegharị anya nke ndị njem nleta East Express na East Express 2020
Expresszọ Ọwụwa Anyanwụ East na Travelistic East Expressute na 2020
Kedu mgbe ụgbọ elu YHT nke Konya-Istanbul ga-amalite?
Mgbe ịmalite ọrụ ụgbọ oloko Balıkesir
Kedu mgbe ụgbọ elu Istanbul Ankara YHT ga-amalite?
Kedu mgbe Adapazarı Train Services ga-amalite?
Ọchịchọ Eastern Express Na-achọ Ike Carrụ Ọrụ: Ndị Anatolia Nleta
Coronavirus na-atụle ụgbọ oloko
Mgbasa Ozi Lakes Region Express iji Bidoghachi na 2013
Mgbe ịmepe okporo ígwè okporo ụzọ na Trabzon
Trabzon Light Rail System Project ga-amalite Mgbe